Nke a bụ OnePlus 8 Pro n'ime: jiri nlezianya nye iwu [+ Video] | Gam akporosis
JerryRigEverything weputara vidiyo ohuru nke OnePlus 8 Pro bụ protagonist. Nke a ka o mere mgbe ọ bipụtara na nso nso a otu ngwaọrụ a ka anwale ule siri ike maka nkwụsi ike na nguzogide, nke o meriri n'enweghi nsogbu.
Vidio ohuru nke youtuber a ma ama nwere njikọ gbasara nkwụsị nke ọnụ. Na nke a ị hụrụ otú JerryRigEverything Ọ ga-emepe ya ma gosipụta ime ya nke ọma.
1 Kedu ihe dị n'ime OnePlus 8 Pro dị ka?
Kedu ihe dị n'ime OnePlus 8 Pro dị ka?
Akara ọhụrụ nke ndị nrụpụta China wepụtara maka ya idiocha ime na nke ọma nke ọma ndokwa. Companylọ ọrụ ahụ enwetawo oghere dị mma maka ihe niile dị na OnePlus 8 Pro, nke egosiri n'ụzọ zuru ezu na vidiyo dị n'elu.
Ọnụ, nwere akwụkwọ nke kwadoro ya dị ka mmiri na-adịghị, ọ dịtụ mgbagwoju anya imegheMana ọ bụghị ọrụ na-achọ n'ezie, ikwu eziokwu. Naanị ị ga-etinye okpomọkụ na mkpuchi azụ ma nyefee agụba n'akụkụ ya iji mepee ngwaọrụ ahụ, dị ka egosiri na ihe ahụ.
Mgbe ị mepere ya, JerryRigEverything gosipụtara ihe e kwuru: ezigbo nhazi nke ọdịnaya ya. Onye youtuber, n'otu oge ahụ, na-ahụ maka ibibi ihe dị ya n'ime ntakịrị, na ebumnuche ziri ezi nke igosi anyị ihe niile ahịa ọhụrụ dị elu na-etu ọnụ. Nkọwa dị ka ihe ntanetị anya nke mkpanaka ahụ na-etu ọnụ, eriri igwe na ndị ọzọ na-adị mfe na vidiyo.
N’enweghị mgbagha Onye OnePlus 8 Pro abụghị naanị na ọ pụtara maka njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya, kamakwa maka iwu ya. Point maka otu n'ime ụlọ ọrụ BBK atọ.
Dị ka nyocha, ekwentị nwere ihuenyo 6.78 nke anụ ọhịa FullHD + AMOLED nwere oke ume ọhụrụ nke 120 Hz. Igwe okwu octa-isi nke na-enye ya ike bụ Qualcomm Snapdragon 865 dị ike, ebe nchekwa RAM nke 8/12 GB LPDDR5 na oghere 128/256 GB nke dị n'ime ya jikọtara ya. Anyị chọpụtakwara batrị 4,500, igwefoto quad nke onye na-agba egbe 48 MP na 16 MP mkpebi selfie sensor. Enweghị oge ọzọ, anyị na-ahapụ mpempe akwụkwọ ntanetị nke ihe nlereanya a na ụdị dị iche iche dị n'okpuru.
IKIRU 6.55-inch Fluid Fluid AMOLED + FullHD + mkpebi (2.400 x 1.080 pikselụ) + 20: akụkụ 9 + 402 dpi + 90 Hz + sRGB Ngosipụta 3 6.78-inch Fluid AMOLED - 60/120 Hz na-akwụghachi ume - 3D Corning Gorilla Glass - nkwado sRGB na ngosi P3
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ OnePlus 8 Pro n'ime: nyere iwu nke ọma [+ Video]
Mgbasa ọjọọ nke Robert Downey Jr. na-akwalite OnePlus 8